မျောလွင့်တိမ် တို့ နားခိုရာ....: ပိုချစ်ရတဲ့သူ ကပေးတဲ့ ခံစားချက်တွေ
Posted by ညိမ်းနိုင် at 6/13/2011
အံ့ရောပဲ... ငါတော့ အဲ့လောက် မခံစားတတ်လို့မရေးဖြစ်ဘူး။ ခုမှ အဲ့သည်ဝတ်ထု ဖတ်ချင်လာတယ်။
ပြောစရာတစ်ခုပဲ... ဟီး......၊ စာလုံးပေါင်းပြန်ပြန်စစ်ပေးပါ... ဟဲဟဲ....။ ဆရာလုပ်လိုက်ရမှနေသာ ထိုင်သာ ရှိသွားတယ်။ :))))
ကိုညိမ်းနိုင်, အဆုံးသတ်ကို ဖတ်လိုက်မှ လက်ဖက်ကောင်း စားချင်ရင် ပလောင်တောင်တက် နှေးရတယ် ဆိုတဲ့ စကားပုံကို ပိုပြီး နားလည်သွားတယ်၊ နှစ်ပတ်ကျော် အချိန်ယူခဲ့တဲ့ ဒီပို့စ်က တကယ်ပဲ ကောင်းတယ်ဗျာ၊ ဒီဝတ္ထုအကြောင်း ဟိုနားဒီနားက တစွန်းတစ ကြားဖူးပေမယ့် ဒီပို့စ်ကို ဖတ်တဲ့အထိ ဘာအကြောင်း ရေးထားမှန်းကို မသိခဲ့ဖူးဗျ၊ အခု ကိုညိမ်းနိုင်က လိုအပ်တဲ့ ပွိုင့်လေးတွေ ထုတ်နှုတ်ပြီး ကိုယ်မြင်တာလေးတွေ ပြောသွားတော့ ဇတ်လမ်း ကျောရိုးကို သိရတဲ့အပြင် စာဖတ်သူရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ မေးခွန်းတွေကြောင့် ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့တောင် ကောင်းလာတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊ ထပ်ပြီး ပြောပါဦးမယ်၊ Thumbs up....!!!
ကျနော်ဖတ်တာ မပြီးသေးဘူး အခု ကိုမောင်လေးပြောတာ ဖတ်ရတော့ တစ်အုပ်လုံးဖတ်လိုက်ရသလိုဘဲ အဲဒီစာအုပ်က အဓိက ပြောချင်တာ
"မတရားမှုကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟုလျှစ်လျုရှူလိုက်ပြီးသည့်နောက် ထိုမတရားမှုက မိမိထံသို့ပါရောက်လာလိမ့်မယ်" ဆိုတာကို အဓိကပြောချင်တယ် ထင်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့လဲ တချို့ကိစ်စတွေက လျစ်လျူမရှုချင်ဘဲ ရှုလိုက်ရတာတွေ ရှိပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်ကတင် ဒီဝတ္တုဖတ်ပြီးသွားတာ...
တချို့နေရာတွေမှာ အစ်ကိုရေးထားသလို မတွေးမိခဲ့ဘူး။ အစ်ကို ရေးထားတာလည်း ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။
“ကြားသည့်လူတိုင်းလိုလိုက ရဲမေ၏အစာအိမ်ထဲတွင် ထမင်းရှိမရှိပဲ စိတ်ဝင်စားကြပြီး ရဲမေအသက်သေမသေတော့ စိတ်မဝင်စားကြပါ...တဲ့...။” တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ အရာတွေကို စတေးပြီးမှ အရေးမပါတဲ့ အရာလေးတစ်ခုလောက်ကို ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ သက်သေထူချင်တတ်ကြတဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို တခါတလေမှာ နားလည်လို့မရတာ အမှန်ဘဲ။ အဲလို စိတ်ဓါတ်တွေကြောင့်လဲ အမှန်တရားတွေ ချောင်ထိုးခံရပြီး မတရားမှုတွေ တိုးပွားလာတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ပိုဆိုးတာက လူတွေဟာ မတရားတာကို တွေ့နေမြင်နေရက်နဲ့တောင်မှဘဲ အဲဒါဟာ မတရားမှုပါလို့ မမြင်တတ်ကြတော့တာတွေ တွေ့တွေ့နေရတယ်။
အရမ်းကိုကောင်းတဲ့ ပိုစ့်လေးပါရှင်။ ဖတ်ပြီး အတွေးတွေအများကြီး ရသွားတယ်။ ကျေးဇူးပါနော်။
အဲဒီ ပုံလေးကို ရှာပြီးတင်ပေးတာနဲ့ အတော်လုံလောက်သွားပြီ... ကျွန်တော့်အတွက်..း))...
ဖတ်လိုက် တွေးလိုက် စဉ်းစားလိုက်
ဖတ်နေတာ ပြီးတော့ မပြီးသေးဘူး
အားပေးနေပါတယ် ..း))
I often visite and rare comment.This post is quite nice to read and pull threads of thinking.Tks for sharing your point of view and deep thought.
ဒီတခါ တော့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖတ်ပြီး ရေးထားတာကိုး ကောင်းတယ် စဉ်းစားစရာလေး တွေနဲ့
ကိုလတ်>>>ဓညင်းသီးက Eတစ်ပြန်၊ငါးဖယ်က ပြောင်းပြန်
လိုက်မယ်..။ဒါနဲ့ အဲ့စာအုပ်ကို ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်..။
ကိုညီလင်းသစ်>>>အကို့ ကွန်မန့်ဖတ်ရတော့ ကျွန်တော့်
ဘာသာ ပြန်ပြီးရှက်မိတယ်..၊တကယ်ဆို နောက်၂ရက်
မပြောလိုက်ရ။အရမ်းရှည်သွားစိုးတာရယ်၊ကြာလာလို့စိတ်မရှည်တော့တာရယ်နဲ့ ပြီး ပြီးရောဖြစ်သွားသလားလို့၊
ကိုယ့်ပို့စ်လေးပြန်ကြည့်မိတိုင်း လမစေ့ပဲ မွေးလာတဲ့
ကိုကိုငွေ>>>ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲ မြင်
တိုင် တစ်ခါတစ်လေ အမှန်တရားကို လစ်လျုရှုသလိုဖြစ်
သွားတာတွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်မလားလို့ ဒီဝတ္ထုလေး
ဖတ်ပြီးမှ ဘာသာ ပြန်တွေးမိတယ်..။ကျွန်တော်ရေးတာ
ထက် မူရင်းကကို ကောင်းတာပါ...၊ကျွန်တော်က ဆင်
နေဝဿန်>>>သူ့ရဲ့ တခြားဓာတ်ပုံတွေလည်း ကျွန်တော် ပေးထားတဲ့လင့်မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်ဗျ။
အရမ်းကို ကိုယ်ချင်းစာဖို့ ကောင်းတဲ့ပုံတွေ...၊
မိုးခါး>>>ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ ဂျူး ဝတ္ထုကိုပြော
ဂျီးတော်>>>ကျွန်တော်တော့ ဂျီးတော်ရဲ့ ရှားရှားပါးပါး
ရေးမယ်လုပ်တော့ ပြန်မေ့သွားလိုက်၊ပြန်ဖတ်လိုက်နဲ့ လုံး
မျှစ်>>> နင်က မျှစ်မိုးငြိမ်းဆိုတော့ “မ”ဝန်းရံနဲ့ တွေ့ချင်လို့
၀တ္တုကတော့ ၀တ္တုပေါ့လေ..။ သူ့ဘာသာ အနှစ်ရှိပြီးသား။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုလေး တွေးမိဖို့ ဆိုတာ လူတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး မဟုတ်လား။ အခုထိ ဒီဘလော့မှာဖတ်ပြီးသမျှထဲ ဒီပိုစ်ကို အကြိုက်ဆုံး..။ ဖတ်လို့လည်း ကောင်း။ တစ်ခုချင်းစီ တွေးသွားတဲ့ အတွေးတွေကို ပုံဖော်ရေးပြသွားတာလေး ပိုသဘောကျတယ်။
အဲဒီစာအုပ် ကြိုက်လို့ ဝယ်ထားသေးတယ်။ တစ်ပုဒ်ဆို ဆိုသလောက် ဖတ်သူရင်ထဲ ထိငြိစေလို့ စောင့်ဖတ်နေရတာပါပဲ။ အားလုံးအတွက် လောင်ကျွမ်းပေးရတဲ့ ကြယ်တွေများလှပါပြီ။
ဇာတ်ကောင်စကားတွေနဲ့ စာရေးသူ ပေးချင်တဲ့ အချက်တွေကို ပြန်ဆွေးနွေးပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုညိမ်းနိုင်။
ဒီစာလေးကို ပရင့်ထုတ်ပြီး ဝတ်ထုနဲ့ တွဲသိမ်းထားသင့်တယ် လို့တောင် ထင်မိတယ်။
(ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ စာလုံးအဆင့် ရေးမရလို့ မျက်စိနောက်နေမယ်ဆို တောင်းပန်ပါတယ်။ စိတ်မရှိပါနဲ့ရှင်။)
အဲဒီ ဝတ္ထုလေး အစ်မတစ်ယောက်က လက်ဆောင်ပို့ပေးလို့ ဖတ်ပြီးသွားပြီ။
သူများနဲ့ မတူတဲ့ အတွေးတွေ ဇာတ်အိမ်တွေရေးဖွဲ့နိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့်လည်း တစ်အုပ်ဆိုတစ်အုပ် လူကြိုက်များတာဖြစ်မယ်
ညိမ်းနိုင်ရဲ့ ဆွဲထုတ်ပြသွားတာလေးတွေကိုလည်း သဘောကျတယ် စာအုပ်ဖတ်ပြီး ကိုယ်မတွေးမိတာလေးတွေကိုပါ မြင်တွေ့သွားတယ် တော်လိုက်တာ
ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ် ဘသားချောဆီမှာရှိတယ်ဟုတ် မျှစ်မိုးညိမ်း ဆိုတာ ဘယ်ကောင်လဲ....ဟိုတခါ အနော်နိမက် လုပ်ခိုင်းတဲ့ကောင်လား စာလုံးသတ်ပုံ ကတော့ အင်း....မပြောတော့ဘူး...
ဆပ်မှုတွေ အလဟသမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲ ......:(
မရွှန်းမီ>>>>ပရင့်ထုတ်ပြီး ဝတ္ထုနဲ့ တွဲသိမ်းသင့်တယ်
ခုနောက်ပိုင်းစာတွေဖတ်ရင် အရင်လိုပြီး ပြီးရောမဟုတ်ပဲ
အင်ဂျလီနာ ဂျိုလီရဲ့ ကားတစ်ကားမှာ အဲံ လို မြင်ကွင်းမျိုး ကို မြင်ဘူးတယ်။
ဒါဟာလည်း မနေသင့်မနေအပ်တဲ့ နေရာ
မနေ့ကတည်းက ဖုန်းထဲကနေ ဖတ်ပြီး သဘောကျနေတာ မောင်လေးရေ :)
အမလည်း အဲ့ဝတ္ထု ဖတ်ပြီးပါပြီ။ ဒါမဲ့ စစချင်းအခန်းက အလောင်းအစားကိုတော့ ယုတ္တိတန်လွန်းတယ် ထင်မိတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ ဆရာမဂျူးရဲ့ ရေးဟန်အတိုင်း သဘောကျစရာအပြည့်ပါပဲ။ အစအဆုံးကို တပတ်လောက် ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အရင်စာအုပ်တွေလောက် မစွဲဘူးလို့ပဲ ပြောရမယ်။ မောင်လေးထုတ်ပြသွားခဲ့တာတွေက ဆရာမ ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတွေနော်၊ အသေအချာ ဆွဲထုတ်ပြီးရေးထားလို့ တချို့ကို ဖတ်တုန်းက မရလိုက်ဘူးလို့တောင် ထင်မိတယ်။ လူ့အသိုက်အမြုံကြီးတခုလုံးရဲ့ စံနစ်တကျမှားယွင်းနေတာကို ဒီတိုင်း လက်ခံမနေဘဲ တတ်နိူင်တဲ့အပိုင်းက ပါဝင်ကြဖို့ လိုရင်းလို့ပဲ နားလည်လိုက်မိပါတယ်။
တခြားသူတွေက ဒီလို မရေးကြဘူးလေ၊
အဲဒီ စာအုပ်ကို အခုထိ ဖတ်လို့ မပြီးသေးဘူး၊
အင်း၊ ပြည်မိုးငြိမ်းက မြ၀န်းရံကို မြင်မြင်ခြင်းပဲ သဘောကျသွားတာမို့ အလောင်းအစား လုပ်လိုက်တာ ထင်ပါတယ်။
တကယ်ဆို အဲဒီထက်အရင် သူတို့ တခေါက်လောက် တနေရာမှာ ဆုံဖူးခဲ့ရင် ပို သဘာဝကျသွားမှာ၊
ဒါမှမဟုတ် အဲဒီလို အလောင်းအစားနဲ့ ဖွင့်လိုက်တာကိုက ၀တ္ထုတခုလုံးရဲ့ သော့ချက်ပဲလေလား။